Lixdaan calaamadood hadaad ninka ku aragto wuuku bahdilay gabaryahay - Aayaha
Xushmadda waa mid kamid ah furayaasha indheer garadka ah ee xiriirka wanaajiya sidaa darteed ninka sida dhabta ah kuu jecel wuu ku xushmeeyaa oo xushmad ayaad ka mudantahay.
Waa kuwan 6 tilmaamood oo muujinaya ninka aanan ku xushmeeyn.
Wuxuu kula barbar dhigaa qoftiisi hore
Ninkaaga kuma xushmeeyo haddii uu kula barbardhigo qoftiisi hore, waana xushmad laawe haddii uu ku dareen siiyo inaadan gaarin qoftiisii hore.
Ilaalin weyn/ Dabagal
Ninkaaga waa xushmad laawe haddii aad dareentid inuu si aad ah kuu ilaaliyo ama kugu daba jiro, Lamaanka xushmadda aanan lahayn intabadan aad ayuu u ilaalin badanyahay mana kuu ogolaanayo xornimo, wuxuu doonayaa inuu ku dul socdo wax kasta aad sameysid oo ay kujiraan saaxiibadaa xushmadda kugu leh, xagee aaday iyo waxaad xiratay maxaa waaye? Iyo hadallo sidaas ah.
Ma qiimeeyo fikradaada ama aragtidaada
Ninkaaga kuma xushmeeyo haddii uu micno la’aan kasoo qaado fikirkaaga isla markaana uusan qiimeyn, ninka xushmadda leh eek u xushmeeya kuna qiimeeya wuxuu dhageystaa hadalladaada wuxuuna qiimeeyaa fikirkaaga xittaa haddii uusan kugu raacsaneyn.
Marnaba kuuma tanaasulo
Saxiibkaa waa xushmad laawe kumana xushmeeyo haddii uusan kuu tanaasulin, ninka xushmad laawaha ah wuxuu had iyo jeer wax walba u rabaa sida uu rabo isaga mana ogola tanaasul , seygaaga waa xushmad laawe.
Wuu ku liidaa
Ninkaaga kuma xushmeeyo haddi uu kaa dhigo qof liita oo aanan waxba galin, lamaanka xusmad laawaha ah si isdaba jog ah ayuu kuu dhaleeceynaa hoos ayuuna kuu dhigaa.
Ficilladiisa ma ilaaliyo
Ninkaaga xushmad malahan haddii uusan marnaba qaadin mas’uuliyadda ficilladiisa, marnaba kuma raali galiyo xittaa wax yar aad u yar oo ah inuu kusugo, xittaa qaladaadkiisa adiga ayuu dusha kaa saaraa.
© Aayaha Online